Booliska Somalia oo sheegay in la afduubtay Doon siday waxyaabaha Maanka dooriya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Booliska Somalia oo sheegay in la afduubtay Doon siday waxyaabaha Maanka dooriya
Booliska Somalia oo sheegay in la afduubtay Doon siday waxyaabaha Maanka dooriya
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Aadan Xasan ayaa faah faahin ka bixiyay dhacdo afduub ah oo dhawaan Doon siday mukhaadaraad loogu geystay degaano ka tirsan Gobolka Bari ee Maamulka Puntland.
Afhayeenka oo Warbaahinta kula hadlayay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 8-dii bishaan Maarso inta u dhaxeysa Xeebaha Xaafuun iyo Ayl ee Gobolka Bari lagu afduubtay doon siday waxyaabo muqaadaraad ah.
Waxa uu sheegay Afhayeenka in Doonta uu waday naaquude u dhashay dalka Yemen iyo 3 qof oo Soomaali ah balse ay is khilaafeen marka ay soo gaareen Xeebaha Soomaaliya intaas kadibna ay afduubteen doontii Saddexdii qof ee Soomaalida ah.
Sidoo kale wuxuu hadalkiisa uu intaasi ku daray in Ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya ay ku daba jiraan dhacdadaan , wuxuuna tilmaamay in raga wada doonta ay usoo gudbeen badwaynta Hidniya
Ugu dambeyn Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Aadan Xasan wuxuu sheegay in xiligaan Soomaaliya aysan ka jirin wax burcad badeed ah, isaga oo beeniyay warar laga qoray oo kusaabsan burcad Badeeda.
War kaan kasoo yeeray Taliska Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli Dowladda Soomaaliya iyo Maamul Goboleedyada ay dagaal kula jiraan waxyaabaha maanka dooriya, balse weli meelo badan oo dalka ah laga soo gelinayo.
Booliska Somalia oo sheegay in la afduubtay Doon siday waxyaabaha Maanka dooriya was last modified: March 14th, 2022 by warsan radio
Dowladda Somalia oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno katirsan Al-Shabaab